12 June 2011 doorashooyinka guud ayaa la dhigay ka hor aasaaska, 29 Oktoobar 2011 oo loo qorsheeyay in la furo, Avcılar-Beylikdüzü metrobus line ayaa ugu dambeyntii shaqeyn doonta bisha Abriil ... Avcılar-Beylikdüzü metrobus line khadka waa qiyaastii mid [More ...]
Metrobüs wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah meelaha ugu culus ee Beylikdüzü ee New Square.
Madaxweynaha Uzun iyo waaxda cilmiga sayniska ee IM ee kormeeraya Fagaaraha cusub ee Beylikdüzü ayaa sheegay in aaggu noqon doono mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee lagu noolaado. Dhismaha Metrobus ee Beylikdüzü waxaa lagu bilaabay dhismaha [More ...]
Beylikdüzü Metrobus Line 3. Dib loo dhigay dibedda.
Furitaanka khadka metrobus Avcılar-Beylikdüzü ayaa dib loo dhigay markii saddexaad. In kasta oo aasaaska la dhigay bishii Maarso ee sanadkii hore, furitaanka dariiqa metrobus, oo lagu dhawaaqay in la kobcin doono Oktoobar, dib ayaa loo dhigay. … Duqa Magaalada Magaalo Weyn ee Magaalada Istanbul, Recep Tayyip Erdoğan [More ...]
Beylikdüzü waxay dib u dhigeysaa laba bilood.
Avcılar-Beylikdüzü metrobus oo loo qorsheeyay in la furo bartamaha bisha March ayaa dib u dhac ku imaan doonta labo bilood sababo la xiriira howlaha la wareegida iyo faa iidada laga bartay iyadoo la yareynayo taraafikada magaalada Istanbul si loo yareeyo gaadiidka dadweynaha Avcılar-Beylikdüzü [More ...]
Metrobus 3 MONTH WADDO SOO DHAWEYN!
Dhibaatooyinka Dhismaha Metrobus ma dhamaan; 3 BILOOD MARKII LABAAD! Khadka Avcılar-Beylikdüzü Metrobus ma soo afjaro nooc dhibaato ah. Kadib markii la shubay la taaban karo iyo asphalt, dhibaatooyin ayaa ka dhacay khadka bullaacadda. Asphalt ayaa jabsaday oo tuubooyin cusub ayaa la dhigay. [More ...]